Olee otú ka Wepụ All Data si iPhone n
Mgbe ere gị iPhone ma ọ bụ inye ya onye onye, ​​1st ihe na ị ga-achọ ime bụ iji jide n'aka na ha na-adịghị enwe ike ịnweta ọ bụla nke gị ọmụma na ngwaọrụ gị, karịsịa niile na onye data gị. Apple N'ezie iwere ọnọdụ a na akaụntụ na N'ihi ya na ya iOS, ụlọ ọrụ na-enye mfe ụzọ nke ihichapụ gị data on iPhone.
Anyị na-aga na-atụle ihe ndị kasị nkịtị ụzọ ihichapụ data si iPhone Otú ọ dị tupu ị malite ya, anyị ukwuu nwere ike ikwu na ị na-ịmepụta ndabere gị iPhone iji nkwado ndabere na mpaghara mma na iCloud ma ọ bụ iTunes mere na ị na-enwe ike iji weghachite ọ bụla data na ị ga-achọ ka e mesịrị na.
Part 1: Common ụzọ wepụ niile data si iPhone
Nkebi nke 2: Olee otú iji wepụ niile data site iPhone na-adịgide adịgide
Nkebi nke 1: Gịnị iche iche nke akụkọ ihe mere eme dị anyị mkpa mgbe nile ihichapu on iPhone?
Nzọụkwụ 1: Gaa gị Home ihuenyo na mgbe ahụ Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia wee pịa on nhọrọ nke 'Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala'.
Nzọụkwụ 2: Ị ga-ugbu a-kpaliri gosi na nke a nhọrọ nke gị, n'ihi ya, pịa on nhọrọ nke 'ihichapu iPhone'. Ka anya dị ka ị na-eme, ị ga-ahụ na-esote mmapụta elu ga-echetara gị na ị ga-enwe ike imezi a edinam, nanị pịa on nhọrọ nke 'ihichapu iPhone' otu ọzọ oge mezue usoro.
Nke ahụ bụ ya. Otú a ị ga-enwe ike ihichapụ gị niile ọdịnaya site na gị iPhone n'ime nkeji ole na ole onwe ya. Otú ọ dị, ọ bụ ndị kasị dịrị nchebe ụzọ ihichapụ onwe gị ọdịnaya na data gị iPhone? Anyị na-arịọ ya dị iche.
N'ihi gịnị? N'ihi na a ka nwere ọtụtụ ndị ọzọ ụzọ otu onye nwere ike weghachite ihe a nile ehichapu data gị iPhone dị ka ọ na mgbe ebibi kpam kpam na iji n'elu usoro. Ihe kpatara nke a bụ eziokwu ahụ bụ na mgbe ọ bụla ị na-eji n'elu usoro niile na iOS na-eme bụ iji wepụ dịnụ njikọ gị data on iPhone na-adị njikere echekwa ọhụrụ data n'ọnọdu-ya-aga n'ihu. Ihe ọ pụtara bụ na ndị niile na data ka na dina gị iPhone ebe nchekwa ebe, na-eche na-elekọta dere na ọhụrụ data na-eme n'ọdịnihu.
Ugbu a, nke na-adịghị ada na-akpali akpali mgbe nile, nri?
Gịnị bụ Wondershare SafeEraser? Nke a bụ ezigbo mfe ajụjụ zaa n'ezie. SafeEraser bụ a otu n'ime a ụdị iPhone data nchicha si Wondershare na e kpọmkwem iji ehichapụ ihe niile ozi nkeonwe gị site na iOS ngwaọrụ na a na-adịgide adịgide ndabere.
Ọ na-eji US Military dabeere n'elu ide technology iji hụ na data na gị iPhone bụ irretrievable maka onye ọ bụla. Ebe a bụ a ngwa ngwa anya na ya atụmatụ.
1 Pịa nzacha na mkpocha - Ị nwere ike iji SafeEraser hichaa junk na dị nnọọ 1 click na ọ ga-onwe elu a oke ohere maka na ị na gị iOS ngwaọrụ.
Photo Compressor - Jiri SafeEraser mpikota onu foto weghaara eji gị iOS ngwaọrụ ndị na-ma nnukwu na-aba na otú onwe elu karịa ebe nchekwa.
Ihichapu Private Data - SafeEraser-enye gị ohere hichapụ ihe niile na onwe data na na-echekwara na ngwaọrụ gị.
Ihichapu ehichapụ faịlụ - All faịlụ na anọwo na-ehichapụ ma ka na-recoverable; SafeEraser nwere ike ịhụ ndị na ihichapụ ha nakwa n'ihi na ị.
Ihichapu All Data - Jiri SafeEraser ka ihichapụ niile data na gị iOS ngwaọrụ-enweghị na-eweghachiri ngwaọrụ ụlọ ọrụ ntọala ma ọ bụ dịrị n'ihi na okwu.
Ọ bụ n'ihi na atụmatụ ndị a na SafeEraser bụ a mmasị oke nke ọtụtụ ndị ga-chọrọ iji hụ na ha data bụ ala ma ghara ewekarị ụdị ọ bụla nke n'ụzọ site onye ọ bụla. Ka anyị a lee anya na otú ị pụrụ isi jiri ya na-adịgide adịgide wepụ niile data gị iPhone ugbu a.
Nzọụkwụ 1: Mgbe nbudata na na na wụnye Wondershare SafeEraser na kọmputa gị, ẹkedori ya. Site na isi interface, họrọ nhọrọ nke 'ihichapu niile Data'.
Nzọụkwụ 2: The ọzọ ihuenyo ga-achọ ka ị na-gosi na ị n'ezie chọrọ ka ihichapụ niile data, otú pịnye ke 'ihichapụ' wee pịa bọtịnụ 'ihichapu Ugbu a'.
Nzọụkwụ 3: Gbaa mbọ hụ na gị iPhone-anọ na njikọ na kọmputa gị n'oge a usoro.
Nzọụkwụ 4: Ozugbo ngwa gụsịwo ihichapụ niile data ọ ga-egosipụta a ihuenyo dị ka e gosiri oyiyi n'okpuru.
Ọ bụ ya! Ọ bụ na mfe hichapụ ihe niile gị data na-adịgide adịgide iji Wondershare SafeEraser, ọtụtụ ihe ndị ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma karịa nkịtị ụzọ eme ya na 100% mma.
> Resource> iPhone> Olee Wepụ All Data si iPhone